EXCEL ကိုအတွက်ရှာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်များ - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုအစီအစဉ်ကို: ရှာနိုင်ပါတယ်
Microsoft က Excel ကိုအစီအစဉ်နှင့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအပါအဝင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဌာနခွဲ, ဒါမှမဟုတ်ဒဿမကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အလုပ်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါ, program ကိုတစ်လှည့်လည်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်လုံးဝအတိအကျဒဿမကိန်းဂဏန်းခဲဒဿမအမှတ်ကအရမ်းအဆင်ပြေတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးနောက်မျိုးစုံဇာတ်ကောင်များ၏စကားရပ်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ပေမယ့်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျိန်းသေမှာအားလုံးဝိုင်းကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကိန်းဂဏန်းများရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, မလုံလောကျတိကျ Round ကတိလိုအပ်ပါသည်ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်လေးနက်သောအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Microsoft Excel ကိုအစီအစဉ်ကိုအရေအတွက်ကဝိုင်းပါလိမ့်မည်အဖြစ်အသုံးပြုသူများအားသူ့ဟာသူ install လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အားလုံးနံပါတ်များ, Microsoft Excel program နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်, အတိအကျနှင့်အနီးစပ်ဆုံးသို့ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါမှတ်ဉာဏ်စတိုးဆိုင်များဥတု၏ 15 ဂဏန်းအထိနှင့်အသုံးပြုသူညွှန်ပြလတံ့သောဥတုရှေ့မှာပြသ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ရှိသမျှတွက်ချက်မှုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်ဒေတာမော်နီတာအပေါ်ပြမသည်နှင့်အညီဖျော်ဖြေနေကြသည်။
ယင်းပတ်ပတ်လည်စစ်ဆင်ရေး၏အကူအညီနှင့်အတူ, Microsoft Excel ဒဿမသောအရပ်တို့ကိုမယ့်အရေအတွက်ကလှဲ။ , အရေအတွက်ကထက်နည်း5အခါ Excel ထဲတွင်တစ်ဦးသမားရိုးကျ Round ဖြစ်စဉ်ကိုလျှောက်ထားချဝိုင်းများနှင့်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်5ညီမျှနေသည် - ကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်။
ဂဏန်းများ၏ round ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ဆဲလ်များ၏ဆဲလ်သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုကိုရွေးပါနှင့်, "မူလစာမျက်နှာ" ၌ဖြစ်ကြသည် "decimal ကိုတိုးပှား" သို့မဟုတ် "decimal Decrease" ပေါ်ဖဲကြိုးကို click ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးခလုတ် tool ကို "နံပါတျ" အကွက်ပေါ်မှာတည်ရှိနေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကသာ rounded နံပါတ်များကိုပြသပါလိမ့်မည်, သို့သော်လိုအပ်လျှင်တွက်ချက်မှုနံပါတ်များအထိ 15 ဂဏန်းပါဝင်ပတ်သက်နေမည်။
သင် "decimal ကိုတိုးပှား" ပေါ်တွင် click လုပ်သည့်အခါထဲသို့ဝင်ဒဿမနေရာများကိုနံပါတ်တစ်တိုးပွားလာနေသည်။
အဆိုပါဒဿမအမှတ်တစ်ဦးခြင်းဖြင့်လျှော့ချပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဂဏန်းအရေအတွက် "decimal Decrease" ။
သင်တို့သည်လည်းဆဲလ်ပုံစံဆက်တင်ကို အသုံးပြု. Round သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် right-click လုပ်ပြီး, အသင်ထောက်ကူအပေါ်ဆဲလ်တစ်အကွာအဝေးကို select ဖို့လိုတယ်, နှင့် menu ကနေ select လုပ်ပါ "Format ကိုဆဲလ်။ "
သင်သည်ထိုဆဲလ်ပုံစံဆက်တင်ကိုပြတင်းပေါက်၌ "နံပါတ်" tab မှာသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေတာ format ကိုအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါလျှင်, သင်မဟုတ်ရင်သင် Round ညှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်, နံပါတ် format ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါကမ္ပည်းအနီးရှိ window ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှာ "ဒဿမသောအရပ်တို့ကိုအရေအတွက်" ရိုးရိုးအရေအတွက်ကိုသင်ရှာနိုင်ပါတယ်သည့်အခါမြင်ချင်ဇာတ်ကောင်များအရေအတွက်ဖော်ပြသည်။ ထို့နောက် "OK" button ကို click ပါတယ်။
ယခင်အမှုများအတွက်လျှင်, setting ကိုရှေးခယျြစရာမှသာပြင်ပ display ကိုဒေတာကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်နှင့်တွက်ချက်မှု (15 ဇာတ်ကောင်အထိ) ကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်အညွှန်းကိန်းကိုသုံး, အခုကျနော်တို့ကတွက်ချက်မှုများအလွန်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ "File" tab ကိုသွားပါ။ ထို့နောက် "Settings" ကိုအပိုင်းပြောင်းရွှေ့။
တစ်ဦးကဝင်းဒိုး Excel ကို Options ကိုဖွင့်လှစ်။ ဒီပြတင်းပေါက်မှာ "Advanced" အောက်မှာသွားပါ။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ဤစာအုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ " ဟုအဆိုပါအမည်အောက်တွင်ယူနစ် setting များကိုရှာဖွေနေကြသည် ဘေးထွက် Settings ကိုမဆိုစာရွက်မှလျှောက်ထားခြင်း, တစ်ခုလုံးအဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုစာအုပ်ရန်, သောတပြင်လုံးကိုဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ "ပြသအဖြစ်တိကျ Set" ကိုလာမယ့်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများထားပါ။ ပြတင်းပေါက်၏အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်ရှိ "OK ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့အခါဒေတာတွက်ချက်မှုအကောင့်ထဲသို့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ display ကိုအရေအတွက်မဟုတ်, မှတ်ဉာဏ် Excel ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင်းတဦးတည်းယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြသအရေအတွက်ကိုချိန်ညှိခြင်းကျွန်တော်အထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြရာနည်းလမ်းနှစ်ခု၏တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
လျှောက်လွှာ features တွေ
သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆဲလ် ဆက်စပ်. အတွက်တွက်ချက်မှုအတွက်ရှာနိုင်ပါတယ်၏ပမာဏပြောင်းလဲသွားချင်ပေမယ့်စာရွက်စာတမ်း၏မြေတပြင်လုံး၌အတွက်ချက်မှုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချချင်ကြဘူးလျှင်, ဤအမှု၌က function ကို "Round" ကကမ်းလှမ်းအခွင့်အလမ်းများ၏အားသာချက်ယူတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, နှင့်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောမူကွဲအဖြစ် အချို့သောအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Round ခွဲဝေထားရမည်အုပ်ချုပ်သောအဓိက features တွေများထဲတွင်:
Round - သမားရိုးကျ Round စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်ဒဿမနေရာများကိုအရေအတွက် approximates;
ROUNDUP - အနီးဆုံးအရေအတွက်ကတက်မော်ကျူးဖို့ရှာနိုင်ပါတယ်;
ROUNDDOWN - module တစ်ခု၏အနီးဆုံးအရေအတွက်ကဆင်းရှာနိုင်ပါတယ်;
MROUND - ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူနံပါတ်စာရငျး;
မျက်နှာကျက် - တဲ့သတ်မှတ်ထားသောတိကျဖို့ module ကိုနံပါတ်အထိစာရငျး;
ကြမ်းပြင် - ချတဲ့အရေအတွက်ကကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတိကျမှန်ကန်မှု modulo စာရငျး;
TRUNC - တစ်ခုကိန်းဖို့ဒေတာကိုစာရငျး;
parity - အနီးဆုံးပင်အရေအတွက် data တွေကိုကျည်;
ထူးဆန်း - ကအနီးဆုံးကိန်းဖို့ဒေတာကိုစာရငျး။
သည် Round လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘို့, ROUNDUP နှင့် ROUNDDOWN input ကို format ကိုအောက်ပါ။ "ရာထူးအမည်နာမကိုအမှီ (နံပါတ် num_digits), သငျသညျဆိုပါကဥပမာ, ထို့နောက် function ကို round (2,56896, 3) လျှောက်ထားသုံးဂဏန်းမှအရေအတွက်ကို 2,56896 ပတ်လည်၌အလိုရှိ၏။ အဆိုပါ output ကိုအရေအတွက်ကိုထားသော 2,569 ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းဆောင်တာ MROUND, ကြမ်းပြင်မျက်နှာကျက်အဘို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Round ပုံသေနည်းလျှောက်ထား: "။ ရာထူးအမည်နာမကိုအမှီ (နံပါတ်, အရေးပါမှု)" ဥပမာအားဖြင့်,2အနီးဆုံးမျိုးစုံမှပတ်လည်ဖို့အရေအတွက်က 11, ကျနော်တို့ (11; 2) function ကို MROUND မိတ်ဆက်ပေး။ အဆိုပါ output ကိုအရေအတွက်က 12 ဖြစ်ပါတယ်။
TRUNC function ကိုပင်များနှင့်ထူးဆန်းအောက်ပါပုံစံကိုအသုံးပြုရန်: "။ အမည်ရာထူးအမည် (နံပါတ်)" အနီးဆုံးရန်သူအရေအတွက်ချွတ်ပတ်လည်၌ပင် 17 ပင် function ကို (17) သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အရေအတွက်က 18 ရပါတယ်။
အဆိုပါ function ကိုတစ်ဦးကလာပ်စည်းသို့မဟုတ်တည်ရှိသည်ရသောဆဲလ် Pre-ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုက string အဖြစ်အုပ်ချုပ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအသီးအသီး function ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ "=" နိမိတ်လက္ခဏာကိုသွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Round လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမိတ်ဆက်တစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းလည်းရှိပါသည်။ သငျသညျသီးခြားကော်လံ rounded နံပါတ်များပြောင်းလဲချင်သောတန်ဖိုးများနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုရှိတဲ့အခါအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, "ဖော်မြူလာ" tab ကိုသွားပါ။ "သင်္ချာ" ကိုတူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့ပြင်လိုချင်သော function ကို select လုပ်ပါ, ပေါ်လာသော list ထဲမှာဥပမာ, ဝိုင်းပါတယ်။
ထို့နောက်ပြတင်းပေါက် function ကိုရဲ့ငြင်းခုံဖွင့်လှစ်။ က "နံပါတ်" လယ်ပြင်တွင်, သငျသညျကို manually နံပါတ်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အလိုအလြောကျတစ်ခုလုံးကို table ၏ဒေတာချွတ်ပတ်လည်ချင်လျှင်, ဒေတာ entry ကို window ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
window function ကိုငြင်းခုံသည်ပြိုလဲ။ ယခုသင်သည်အဘယ်သူ၏ဒေတာကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်သွားကြသည်ကော်လံဆဲလ်များ၏အလွန်ထိပ်ပေါ်မှာ click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်တှငျမှတျတမျးတငျထားသတန်ဖိုးကိုပြီးတာနဲ့တန်ဖိုးကို၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်တဖန်ပြတင်းပေါက် function ကိုငြင်းခုံဖွင့်လှစ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအစိတ်အပိုင်းကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်သည့်ရန် "bits သည်အရေအတွက်" ကိုနည်းနည်းရေးအတွက်။ ထို့နောက် "OK" button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, နံပါတ်များကို rounded ဖြစ်ကြသည်။ ပတ်ပတ်လည်တူညီသောလမ်းနှင့်အခြားမည်သည့်တပ်မက်လိုချင်သောဒေတာကော်လံရန်, rounded တန်ဖိုးဆဲလ်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ဖို့ cursor ကိုညွှန်ကြားချလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးစားပွဲ၏အဆုံးတိုင်အောင်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါတိပ်ခွေပေါ်တွင် button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်, နှင့်ဆဲလ်ပုံစံဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲနေဖြင့်: သင်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, အရေအတွက်ကို၏မြင်နိုင် display ကိုချွတ်ပတ်လည်၌နှစ်အခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အမှန်တကယ်ဒေတာရေတွက်ရှာနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်: တစ်ဖွဲ့လုံးကစာအုပ်၏ setting ကိုပြောင်းလဲပြီး, ဒါမှမဟုတ်အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အသုံးပြုမှုသည်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရွေးချယ်ရေးသင်ဖိုင်ထဲမှာရှိသမျှသည်ဒေတာအတွက်ရှာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးစွဲဖို့မသွား, ဒါမှမဟုတ်ဆဲလ်တစ်အကွာအဝေးကနေနေကြခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။